China Large Metal Finned Tube Machine Manufacture uye Factory |Yuanfang
Huru Metal Finned Tube Machine, inonyanya kukodzera kugadzirwa kwemhangura 10mm chidimbu cheyakakwirira yakabikwa chubhu, simbi yemhangura 10mm chidimbu chepamusoro yakafinhwa chubhu uye composite aluminium finned chubhu kunze kwedhayamita ye70㎜ pamusoro pe85㎜ pazasi.Rolling process yakagadzikana, yakavimbika, mashandisiro emidziyo yave kuzivikanwa uye kuvimbwa nevatengi vazhinji.
Product parameters:zvinoenderana nevatengi kudhirowa kana yakakodzera Unyanzvi data dhizaini nekugadzira;
1. Chii chinonzi procurement system yekambani yako?
Yemazuva ano procurement manejimendi system, centralized bhidhiri yekutenga zvinhu zvakawanda, yakarongwa kutenga.
2. Ndeapi vatengesi vekambani yako?
3. Ndeipi mwero wevanopa kambani yako?
Kuendeswa nenguva, kunaka kunosangana nezvinodiwa, uye mutengo unonzwisisika.
1. Ndevapi vanhu uye misika izvo zvigadzirwa zvako zvakafanira?
Vagadziri veinjini yedhiziri, vagadziri vedhiziri, mafiriji uye vagadziri vekuchinjana kupisa, migodhi yemarasha, makemikari nevagadziri vesimba.
2. Ko vatengi vekambani yako vakawana sei kambani yako?
Kuburikidza nezvisumo zvevatengi, mawebhusaiti, maratidziro eindasitiri.
3. Ko kambani yako ine mhando yayo here?
Faraway brand, zvikwangwani zvakanyoreswa: "Xinhaihua", "YUANFANG", nezvimwe.
4. Zvigadzirwa zvako zvakatumirwa kune nyika dzipi nematunhu?
5. Zvigadzirwa zvekambani zvine zvazvakanakira zvisingadhuri, uye ndezvipi chaizvo izvo?
State-owned bhizinesi endorsement, tekinoroji mukana, yakagadzikana chigadzirwa mhando, yakavimbiswa nguva yekutumira.
6. Ndeapi makwikwi epamba uye ekunze ezvigadzirwa zvekambani yako?Zvichienzaniswa navo, ndezvipi zvakanakira uye zvakaipira kambani yako?
CRRC Zvikamu Co., Ltd., zvakanakira: yakagadzikana chigadzirwa mhando, yakavimbiswa nguva yekutumira.
Zvakapfuura: Mhangura-Aluminium Flux Cored Brazing Filler Metal
Zvinotevera: Yakakura Heat Exchanger